Zvisinei, nokushayikwa kwekunyora, zvinenge zviripo zvimwe zvingaitika. Kune imwe, pangava nemumwe munhu angashandisa zvakanakisisa purogiramu yemabasa avo akaipa. Vangatanga kutanga kutumira mameseji kushungurudzwa uye zviziviso en masse. Asi zvinoita sekunge vashanduri vari kuseri kwevanogadzira webhusaiti vari kufunga kumberi uye vakabatanidza IP kuteedzera kune webhusaiti. Muchidimbu, webhusaiti ino inoteedzera iyo IP kero yekombuta iwe yauri kushandisa uye pamwe kumisa akawanda zvikumbiro kubva kune imwechete komputa.
Pakuvhura iyo FooSMS webhusaiti, ini ndoziva ipapo ipapo kuti vari zvakakomba nezve mahara kutumira mameseji. Iwo ndeimwe eayo mashoma mawebhusaiti mune ino runyorwa ayo anoratidzira zviri nyore iwo emahara maSMS kugona. Uye iwe unogona kuwana mukana kune izvo zvese pasina kuda kunyoresa. Ehezve, senge mune mazhinji mamwe masosi kunze izvozvi, vane zvinokurudzira kune avo vanovimba navo zvakakwana kusaina.
Zvinotyisa kuti FooSMS haidi kuti iwe unyore. Asi kunyoreswa kunovhura zvimwe zvekushandisa zvaunogona kutora mukana nazvo. Heano mamwe mabhenefiti aari kusimudzira kana iwe ukasarudza kunyoresa navo.